चुनावी प्रतिबद्धता कति पूरा गर्नुभयो नेता ज्यू ? « NagarikTimes : National News Portal From Kathmandu
- नीरा गौतम
२८ कार्तिक २०७६, बिहीबार १३:५५
चुनावी प्रतिबद्धता कति पूरा गर्नुभयो नेता ज्यू ? जनताले यस्तो प्रश्न सोध्दा प्राय: नेताहरुको बोली नै बन्द हुन्छ । कतिपय नेताको शिर निहुरिन्छ । केहीले असहज परिस्थितिलगायतका कारण देखाएर जनताका प्रश्न थामथुम गर्ने प्रयास गर्छन् ।
तर, रुपन्देहीमा भने त्यस्तो भएन । चुनावी प्रतिबद्धताको समीक्षासहितको सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा जनताका प्रश्नको जवाफ दिन उपस्थित भएका यहाँका नेताले शिर ठाडो पारेर बोले । नेताहरुले चुनावी प्रतिबद्धताअनुरुप भइरहेका विकासे आयोजनाको फेहरिस्त जनता सामु राख्दा यहाँका सर्वसाधारण खुशी हँुदै ताली बजाए ।
नमस्ते नेपाल नामक संस्थाले बुधबार साँझ शङ्करनगरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव तथा रुपन्देही क्षेत्र नं- २ का सांसद विष्णु पौडेल, क्षेत्र नं २ का प्रदेशसभा सदस्य लीला गिरी र तिलोत्तमा नगरपालिकाका प्रमुख वासुदेव घिमिरेलाई निम्ता गरिएको थियो ।
कार्यक्रममा आयोजकले चुनावअघि जनतासामु गरेका प्रतिबद्धता कति पूरा गर्नुभयो भनेर प्रश्न गर्दा सांसद विष्णु पौडेलले आफूले सम्पन्न गरेका कामको लामो सूची प्रस्तुत गर्नुभयो ।
महासचिव पौडेलले भैरहवा-लुम्बिनी सडक, लुम्बिनी-तौलिहवा सडक, बुटवल-बेथरी सडक, बुटवल- नारायणगढ सडक, बुटवल-कोहलपुर, बुटवल-पोखरा सडक निर्माण तथा स्तरोन्नतिपछि रुपन्देही उच्चस्तरको सडक सञ्जालले विभिन्न जिल्लासँग जोडिने बताउनुभयो ।
सो अवसरमा महासचिब पौडेलले आफ्नो अभिभारा काँधमा बोकेर नेकपा नेतृत्वको सरकार अगाडि बढेकाले जनताले यसको सही मूल्याङ्कन गर्ने धारणासमेत राख्नुभयो ।
“हामीले चुनाबमा गरेका प्रतिबद्धता सिरानीमा राखेर यहाँहरुले अध्ययन गरिदिनुहोला”, महासचिव पौडेलले भन्नुभयो,“ ६० महिनापछि प्रतिबद्धताको समीक्षाका लागि फेरि आउनेछौ ।”
उहाँले सामाजिक सुरक्षा, गरीबी निवारण, पूर्वाधार विकास, राष्ट्रको सम्मान र स्वाभिमान वृद्धि गर्ने सवालमा महत्वपूर्ण काम भएको उल्लेख गर्नुभयो । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीका क्षेत्रमासमेत धेरै काम अगाडि बढेको उहाँले बताउनुभयो ।
महासचिव पौडेलले सुकुम्वासी समस्या स्थायीरुपमा समधानका लागि कानून निर्माण भएकाले अब काम अगाडि बढ्ने बताउनुभयो । महासचिव पौडेलले प्रदेश- ५ को अस्थायी राजधानीलाई स्थायी राजधानीको रुपमा प्रदेशसभाले परिणत गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
संसारले चिनेको लुम्बिनीसँग प्रदेशको नामाकरण जोडिने विषयमा कसैले प्रश्न नउठाउने उहाँको भनाइ थियो । “भौतिक र मानवीय विकासको दृष्टिकोणले रुपन्देहीलाई देशकै नमूना जिल्ला बनाउने हाम्रो अठोट हो”, महासचिव पौडेलले भन्नुभयो,“मेरो प्रयासमा भएका विकास निर्माण र आयोजनाका काम पूरा गरेरै छोड्नेछु ।”
कार्यक्रममा प्रदेश-५ का उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री लीला गिरीले प्रदेश- ५ लाई मुलुककै नमूना प्रदेशको रुपमा निर्माण गर्नका लागि काम अघि बढाएको बताउनुभयो । उहाँले आर्थिक प्रगति र कामका हिसाबले अन्य प्रदेशको तुलनामा प्रदेश अगाडि रहेको बताउनुभयो ।
मन्त्री गिरीले रुपन्देहीका विभिन्न स्थानलाई शहरीकरणकोरुपमा विकास गर्नका लागि सडक, खानेपानी, ढल निकास र सञ्चारको विस्तारका लागि स्थानीय तहसँग छलफल भइरहेको बताउनुभयो । मन्त्री गिरीले प्रदेशको समृद्धिका लागि पर्यटन, कृषि र उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखेर विभिन्न योजना र कार्यक्रम तय गरेको उल्लेख गर्नुभयो ।
प्रकाशित मिति: २८ कार्तिक २०७६, बिहीबार १३:५५